Akwụkwọ Ritesh Patil na Martech Zone |
Edemede site na Ritesh Patil na-bụ mmadu
Ritesh Patil na-bụ mmadu
Ritesh Patil bu onye nchoputa nke Mobisoft Infotech nke na-enyere aka na ụlọ ọrụ na teknụzụ mkpanaka. Ọ hụrụ teknụzụ n'anya, ọkachasị igwe teknụzụ. Ọ bụ onye na-ede blọgụ nwere mmasị na ide ihe na ngwa mkpanaaka. Ọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-eduga mmepe android yana ndị mmepe ngwa ngwa nwere ngwa ngwa nke mepụtara ngwa mkpanaka ọhụụ na mpaghara dịgasị iche iche dịka Ego, Insurance, Health, Entertainment, Productivity, Social Causes, Education na ọtụtụ ndị ọzọ ma tinye ọtụtụ onyinye maka otu ihe ahụ.
Ebumnuche 10 kacha elu iji wuo weebụsaịtị gị na WordPress
Tọzdee, Disemba 6, 2018 Ritesh Patil na-bụ mmadu
Na azụmaahịa ọhụrụ, ị dịla njikere ịbanye n'ahịa mana enwere otu ihe na-efu, weebụsaịtị. Azụmaahịa nwere ike igosipụta akara ngosi ha ma gosipụta ụkpụrụ ha ngwa ngwa nye ndị ahịa site na enyemaka nke weebụsaịtị mara mma. Inwe ebe nrụọrụ weebụ dị mma, na-adọrọ mmasị bụ ihe dị mkpa ụbọchị ndị a. Mana kedu nhọrọ iji wuo weebụsaịtị? Ọ bụrụ na ị bụ ọchụnta ego ma ọ bụ na ịchọrọ ị wuo ngwa gị oge mbụ